Kare, ibwe iri yainzi rauchtopaz. Nhasi, anozivikanwa munyika yose smoky Goldstone.
Rauchtopaz inonyanyoshandiswa kuwanikwa zvinotevera ruvara vakaparara: yendarama-kuchena, mashava, rima pepuru uye dema. Uye vose zvicherwa vane segirazi unaku. Kazhinji saturation Ruvara ibwe kunosimudzirwa kubva pangoro kumusoro. Kusvikira ikozvino, masayendisiti haana kukwanisa kuona chikonzero chimwe Ruvara chicherwa. Vanodavira kuti noruvara ibwe kunoenderana dhigirii dzokuteerera. Handiti, ndiko dzinongoitika Goldstone mu granites, apo nokusingaperi pane shoma nemwaranzi. Zvisinei, guru uwandu zvicherwa yaishandiswa zvishongo artificially irradiated chokubudisa smoky tint.
The deposits amabwe ichi vanozivikanwa muna Spain, Brazil, USA, Namibia, Madagascar, Germany, Russia uye Japan. mhando iyi Goldstone inowanikwa zvakasikwa ari muchimiro crystals (translucent kana segirazi). Wezvamatongerwe zvikuru runako Druze uye aggregates, vanogona kusvika guru chaizvo hukuru (kusvika imwe mita). Geologist smoky Goldstone crystals akawanikwa, rairema matani anopfuura maviri. Active chicherwa inoumbwa hydrothermal nzira pasi kumusoro kumanikidzwa pamwe kubatsirwa inopisa mvura mhinduro.
In ayo mamiriro, smoky Goldstone zvakafanana achazunungusa rekristaro, ametesti uye citrine. Zvakatonyorwa refu Zvakacherechedzwa kuti ibwe iri ane pfuma akadai pleochroism, kuubvumira kuchinja ruvara kubva zvakasvibirira kuti pepuru. Kana chavakaona kumusoro tembiricha (pamusoro 300 madhigirii) rauchtopaz anogona chisanyanya nemamwe smoky tint.
Kwemakumi emakore zvicherwa zvaishandiswa zvishongo zvinangwa. Kubva nhamba Wakaitwa, iyo ndokuzoiswa ari pendants, mhete kana panhengo. Smoky Goldstone - pazera chipa oornag dombo rinokosha. Zvinoshamisa crystals zviri chicherwa yakaisvonaka rinoshandiswawo senzira kushongedzwa nezvavaitsanangura muna Mineralogical Museum.
The ehupfumi kuti Goldstone
Stone ane chinoshamisa zvechokwadi kuporeswa uye mashiripiti unhu. Kubvira kare, vanhu vaidavira kuti rauchtopaz anogona kuponesa vanhu kubva siyana zvepfungwa: mwoyo, kubatwa kuzviuraya, zvikaramba zviripo. Zvinofungidzirwa kuti smoky Goldstone anogona kukuponesa zvinodhaka, doro uye fodya nedoro. ibwe iri anokwanisa kurapa zvirwere zvetsandanyama nemapfupa ezvinhu, nemudumbu, mukuwedzera, izvozvo anodzoreredza potency nevanhu.
Rauchtopaz ane simba simba ibwe, iro rinoshandiswa mune tsika dzavo n'anga dema uye vafemberi. Zvinofungidzirwa kuti chicherwa ichi kukwezva masimba zvakaipa uye mweya yavanhu vakafa. Inogona kukubatsira kufanotaura nezveramangwana uye kubata kufungisisa muzvirongwa.
Kana rauchtopaz kushandiswa chete zvinangwa zvakanaka, anokwanisa richiva tambira wayo. Zvinofungidzirwa kuti ibwe iri kunogona kuita munhu akasimba uye nechivimbo, kunobatsira kukunda matambudziko akasiyana-siyana uye zvipingamupinyi munzira youpenyu, anokupa simba, mufaro, mufaro. Mukuwedzera, chicherwa ane rakasiyana mano excrete marara uye muchetura. Uye ichi hachisi zvivako kuitwawo Goldstone.
Mineral rinoshandiswa kubva kare sezvo nemazango uye mascots. Zvinofungidzirwa kuti rauchtopaz anogona kupa muridzi wayo nemakore nemakore uchenjeri, kubvisa hasha, godo uye pfungwa dzakaipa, simbisa zvakasikwa tichida.
Vanofarira ibwe iri?
Jewelry pamwe Goldstone vanobatsirwa kure kwete zvose kwezviratidzo zvenyeredzi. The akanaka matambudziko ibwe iri kunogona chete Libra uye Scorpio. Zvose zvimwe zviratidzo nyeredzi dziri zano kupfeka izvozvo chete pakurapa. zvinangwa. Nekenza pabwe uye anoita contraindicated.
Cardiac kutenderera. Maitikiro of cardiac kutenderera
System Analytical tsvakurudzo nzira
Mwero haibatsiri mubhizimisi nhasi
Makopi Mari. How kusiyanisa Kunyepa?
Salad pamwe sauerkraut - zvakanaka dhishi patafura zororo
Cosmonaut Titov: pfupi Biography
Xlsx format faira: chii chokuzarura?
Derbent nhare nhoroondo uye zvinotyisa (mufananidzo)
Saka pane zvakanaka yemagetsi uye mvura underfloor kudziyisa? User Mashoko vakanzwa sokukumbira!
The chombo "Yakhont" - ane asymmetrical Achipindura kutyisidzira kubva kugungwa
Sei kwazvo tsandanyama pashure muviri? How kudzivisa marwadzo ari tsandanyama pashure muviri?
Mwero mapuroteni iri weti
A nyore kadhi kuti amai - kupfuura zvinodhura uye tremulous chipo
Popular womuenzaniso Dzhidzhi neHadhidhi: kureba, uremu, Biography, upenyu hwomunhu